famandrihana - World Book
Na lalana mandrakizay
Novambra 23, 2021 ny Guelbenzu, JM
Aiza no ahitana ny boky O calle para siempre nosoratan'i Guelbenzu, JM? Inona no atao hoe boky O forever silent? Miatrika raharaha vono olona vaovao eo afovoan'ny fankalazana ny fampakaram-bady ny mpitsara Mariana de Marco. Amin'ny alina alohan'ny fampakaram-bady kanto any Madrid, ny pretra izay handeha amin'ny… hamaky bebe kokoa
Sokajy boky Tags piarovana Leave a comment
Novambra 23, 2021 ny Oruna, Maria
Aiza no hividianana ilay boky Toerana haleha? Inona ny boky A place to go about? Volana maromaro no lasa hatramin'ny nahitan'i Suances, tanàna kely iray any amin'ny morontsirak'i Cantabrian, ny famonoana olona maro izay nampihorohoro ny mpiara-belona taminy. Rehefa toa niverina tamin’ny laoniny anefa ny zava-drehetra, dia niseho ny razana... hamaky bebe kokoa
Ilay hevitra mampihomehy tsy hahita anao intsony
Novambra 22, 2021 ny Montero, Rose
Aiza no hividianana ilay boky Ny hevitra mampihomehy tsy hahita anao intsony? Momba ny inona ilay boky hoe The Ridiculous Idea of ​​Never Seeing You Again? Lahatsoratra tena izy, mahavariana ary miray tsikombakomba momba ny fiainana sy ny alahelo izay hanaitra anao amin'ny pejy voalohany. Ho tsapanao fa nosoratana ho anao fotsiny izany, toy ny mitranga amin'ny… hamaky bebe kokoa
Amin'ny faran'ny volana janoary
Novambra 22, 2021 ny Padilla, Xavier
Aiza no ahitana ilay boky At the end of January by Padilla, Javier? Inona no atao hoe boky amin'ny faran'ny volana Janoary? Loka Comillas ho an'ny Tantara, Biography ary Fahatsiarovana. Tamin'ny tapaky ny taona XNUMX, ny oniversite espaniola sasany dia nahita ny fahaterahan'ny fanetsiketsehana mihamilamina sy tapa-kevitra hanohitra ny jadona Franco. Namaly voalohany tamin'ny fahasahiranana ny fitondrana,… hamaky bebe kokoa
vao tonga aho
Novambra 9, 2021 ny Gould, Stephen Jay
Aiza no hividianana ilay boky vao tonga avy amin'i Gould, Stephen Jay? Inona no atao hoe boky vao tonga? Ireo izay nankafy ny fomban-drazana Stephen Jay Gould dia handray amin'ny fifangaroana mangidy amin'ny fahafinaretana sy ny fanaintainana ny asa izay manamarika ny fiafaran'ny asa iray naharitra enina amby roapolo taona. Teo anelanelan'ny 1974 sy 2001,… hamaky bebe kokoa
Aleveno ny maty
Novambra 8, 2021 ny Martinez de Pisón, Ignacio
Aiza no ahitana ny boky Bury the Dead? Momba ny inona ilay boky Fandevenana ny Maty? José Robles dia naman'i John Dos Passos ary mpandika teny ho an'ny Manhattan Trasfer. Repoblikana nafana fo, novonoina tamin’ny 1937. Tapa-kevitra ny hamoaka ny marina, ary teo anivon’ny fiokoana fahanginana izay hahatezitra ny mpanoratra toa an’i Ernest... hamaky bebe kokoa
Mianara amin'ny fahaverezana
Novambra 7, 2021 ny Neimeyer, Robert A.
Aiza no ahitana ny boky Mianara amin'ny fahaverezana? Inona no dikan'ilay boky hoe Learning from Loss? Ny fahafatesan'ny olon-tiana iray, indrindra rehefa mampahory azy, dia fanamby lehibe izay mety handresen-dahatra ireo voakasika na dia efa nihena aza ny fiantraikan'ny fihetseham-pony. Saingy ny fahatsapana ho very dia mety ... hamaky bebe kokoa
The Marquis of Santillana
Novambra 6, 2021 ny Arteaga, Almudena de
Aiza no hividianana ny boky The Marquis of Santillana? Momba ny inona ilay boky hoe The Marquis of Santillana? Íñigo López de Mendoza, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Marquis of Santillana, dia lehilahy niavaka sy tsy manam-paharoa: nandray anjara tamin'ny ady maro ho an'ny fahefana, tafiditra tamin'ny fomba iray na hafa tamin'ny fifandirana teo amin'ny fanjakan'i Castile... hamaky bebe kokoa
Nahoana ny firenena no tsy mahomby
Novambra 6, 2021 ny Acemoglu, Daron/Robinson, James A.
Aiza no ahitana ilay boky hoe Why Countries Fail by Acemoglu, Daron / Robinson, James A.? Momba ny inona ilay boky hoe Why Countries Fail? Mitovy ny mponina sy ny kolontsaina ary ny toerana ara-jeografika an'i Nogales (Arizona) sy Nogales (Sonora). Nahoana no manankarena ny iray ary mahantra ny iray? Nahoana i Botswana no iray amin'ireo… hamaky bebe kokoa
Milenio Carvalho I. Mizotra mankany Kabul
Novambra 5, 2021 ny Vazquez Montalban, Manuel
Aiza no hividianana ny boky Milenio Carvalho I. Rumbo a Kabul nosoratan'i Vázquez Montalbán, Manuel? Momba ny inona ilay boky Milenio Carvalho I. Rumbo a Kabul? Raha tao amin'ny birao ambony i Pepe Carvalho dia voampanga ho namono olona, ​​​​dia nandeha sambo nankany Genoa izy sy ny Biscuter tsy afa-misaraka tamin'ny anarana sandoka, Bouvard sy Pécuchet literatiora. A… hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy66 manaraka →